2013 October donation plan
As the venue for October, 2013 donation (41st monthly donation) plan, ODF Myanmar has chosen “Shwe Guu Lay Maharpaduma” monastic education centre from Bago Township, Bago Division. It is the place which provides free education not only for novices and nuns but also for students from nearby areas.
At the centre, thirty teachers (primary, secondary and high level) are in charge of teaching from kindergarten to 11th grade level and for 2013-2014 academic year, the total number of learners is 943, including novices, nun and students.
Therefore, we are announcing this news so that our friends and donors, who are enthusiastic to offer hands, would cooperate with us in contributing to suchaplace which provides free education for learners. We would also like to encourage our donors to provide helping hands in the same way as in previous donations which were accomplished by altruism and effort of our generous donors.
Please be informed that donations will be collected till 2013-November-3 (Sunday). Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အလှူ (၄၁ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးမြို့ နယ်အတွင်းရှိ ရွှေဂူလေး မဟာပဒုမ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါကျောင်းသည် သာမဏေများ၊ သီလရှင်များကို သာမက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုပါ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ကျောင်းတွင် မူလတန်းပြ၊ အလယ်တန်းပြနှင့် အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း (၃၀)မှ တာဝန်ယူ၍ သူငယ်တန်းမှ ဒဿမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားပေးလျှက်ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင် သာမဏေ၊ သီလရှင်၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း (၉၄၃)ယောက် ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ အခမဲ့ပညာဒါန ပေးဝေလျှက်ရှိသော ရွှေဂူလေး မဟာပဒုမ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ စေတနာရှင် မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအား မိမိတို့ ODF Myanmar နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ အလှူတွင် တတ်စွမ်းသလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူရှင်များ၏ စေတနာအား၊ လုပ်အား အကူအညီတို့ဖြင့် အောင်မြင်စွာလှူဒါန်းခဲ့ပြီးသော ယခင်အလှူများအတိုင်း ဆက်လက်လှူဒါန်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
2013-June donation event
We are very glad to announce that we received 1346 SGD (1,010,000 Kyats)for the donation plan of June, 2013 (38th monthly donation) which was proposed to contribute salaries for the teachers from the free education center opened at “Takekhar Yarma” nunnery from East Dagon Township, Yangon.
Under the guidance of Abbess Daw Takekha Nyarni, the nunnery has been established as the education center since 2010. Currently the place is not only taking care of orphans (from Kindergarten to fourth grade) for their basic needs and schooling but also giving free education to needy students (from Kindergarten to tenth grade) from the surrounding area.
As ODF Myanmar has chosen that nunnery as the place to focus our long term assistance project, we contributed some supports such as providing crochet and knitting lessons for nuns and girls from the neighborhood, giving salaries for the teachers from the free education center opened at the nunnery for 2012-2013 academic year and offering teachers training courses for those teachers.
Therefore, we would like to give our warm appreciation to our generous donors, volunteers and our friends who managed the donation plan to contribute salaries for the teachers from the free education center opened at “Takekhar Yarma” nunnery. May you be well and happy!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃ ဇွန်လ အလှူ (၃၈ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဒဂုံမြို့ သစ် အရှေ့ ပိုင်းရှိ တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အခမဲ့စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လစာအတွက် လှူဒါန်းရန် အလှူငွေ စုစုပေါင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၃၄၆.၇၀ (မြန်မာကျပ်ငွေ ဆယ်သိန်းတစ်သောင်းကျပ်) ရရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်သည် သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်တိက္ခဉာဏီ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် သီလရှင်ပညာရေးကျောင်းအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် သူငယ်တန်းမှ စတုတ္ထတန်းအထိ မိဘမဲ့ကလေးများအား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပညာသင်ကြားပေးနေသည့်အပြင် အနီးအပါးမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလည်း သူငယ်တန်းမှ ၁၀ တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ODF Myanmar အဖွဲ့ အနေဖြင့် ယင်း သီလရှင်စာသင်တိုက်အား အဖွဲ့ ၏ ရေရှည်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ပြီး ကျောင်းရှိ သီလရှင်များနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မိန်းကလေးများအတွက် ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်းပို့ ချပေးခြင်း၊ ယင်းစာသင်တိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အခမဲ့စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လစာအတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် တာဝန်ယူပေးခြင်း၊ အဆိုပါ ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်းပို့ ချပေးခြင်းများဖြင့်လည်း အင်အားဖြည့်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် တိက္ခာရာမ သီလရှင်ပညာရေးကျောင်းအတွက် လိုအပ်လျှက်ရှိသော အခမဲ့ စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လစာအတွက် သဒ္ဓါကြည်ဖြူစွာဖြင့် လှူဒါန်းကူညီကြသော အလှူရှင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ ဝင်များ၊ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲပေးသော မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
2013 August & September donation plan
Let us announce that ODF Myanmar has chosen “Aung Pan Myaing” monastic education centre from Aye Ywar Lay Village, Nyaung Tone Township, Ayeyarwaddy Division as the place for August & September–2013 donation plan (40th monthly donation).
“Aung Pan Myaing’ monastic education centre provides education aids to primary and secondary students and it is the place on which students from nearby villages are dependent.
During the rainy season when the transportation can be made only by boat, students from nearby villages have to go to school, onadaily basis, by boat which would take about 30 minutes.
Therefore, we would like to encourage our friends and donors, who are enthusiastic to offer hands as much as they can, to cooperate with us in making contribution to suchaneedy place.
Please be informed that donations will be collected till 30th September 2013 (Monday). Donations can be made through ODF volunteers (volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF bank accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund – Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလ အလှူ (အကြိမ် ၄၀ မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ အေးရွာလေးကျေးရွာရှိ အောင်ပန်းမြိုင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအား လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
ထိုကျောင်းသည် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအား ပညာသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး အနီးတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများမှ အားကိုးအားထားပြုနေရသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
မိုးတွင်းကာလ ရေလျှံသောအချိန်များတွင် ရေလမ်းဖြင့်သာ သွားလာနိုင်သဖြင့် အနီးတဝိုက်ကျေးရွာများရှိ ကလေးငယ်များမှာ ကျောင်းသို့လှေဖြင့် မိနစ်(၃၀)ခန့်နေ့ စဉ် သွားရောက်ရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အထောက်အပံ့မပြည့်စုံသော အောင်ပန်းမြိုင် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်းအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ကူညီလိုသူ စေတနာရှင် မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအား မိမိတို့နှင့် လက်တွဲ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ အလှူတွင် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
2013-July donation plan (39th monthly donation)
We would like to announce that, as the plan for July-2013 donation, ODF Myanmar has decided to donate required blankets, pillows and bed sheets to the 1000-bed hospital in Naypyidaw. It is required for patients who are suffering from diseases and illness to take bed rest cozily and comfortably. Since operated patients are more likely to suffer from the cold weather than healthy persons, we have decided to donate bedding supplies to help patients stay safe and warm.
As Naypidaw hospital is the one on which patients from surrounding areas mainly depend, we are publicizing this news so that we could contribute necessities of the patients as much as we can. Therefore, we would like to encourage our donors to provide helping hands in the same way as in previous donations which were successfully completed by generosity and effort of our benevolent donors.
Please be informed that donations will be collected till 11th August 2013 (Sunday). Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for banks accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
ODF Myanmar (One Dollar Fund –Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ အလှူအဖြစ် နေပြည်တော် ခုတင် ၁၀၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံကြီး သို့ လိုအပ်သည့် စောင်၊ ခေါင်းအုံး၊ အိပ်ရာခင်းများ လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများ၊ နာမကျန်းသောသူများသည် သာမန်ကျန်းမာနေသောလူတို့ထက် နွေးထွေးစွာ အနားယူရန် လိုအပ်ပေသည်။ ခွဲစိတ်ခံလူနာများသည် အအေးဒဏ်ကို သာမန်ကျန်းမာနေသောလူတို့ထက် ပိုမိုခံစားရတတ်ပေရာ လူနာများ နွေးထွေးလုံခြုံစွာနေနိုင်စေရေး အတွက် ရည်ရွယ်ကာ လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နေပြည်တော်ဆေးရုံကြီးသည် နေပြည်တော်နှင့် အနီးတဝိုက် ဒေသများမှ လူနာများအတွက် အားထားရာ နေရာ တစ်နေရာဖြစ်ပြီး ဝေဒနာရှင်များအတွက် လိုအပ်နေသော အရာများအား တတ်စွမ်းသလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူရှင်များရဲ့ စေတနာအား၊ လုပ်အားအကူအညီတုိ့ဖြင့် အောင်မြင်စွာလှူဒါန်းခဲ့ပြီးသော ယခင်အလှူတို့အတိုင်း ဆက်လက် အားပေးကူညီလှူဒါန်းကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အလှူငွေ များကို ၂၀၁၃ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
2013 March & April Donation Event (36th monthly donation)
With great pleasure, we would like to announce that we could raise 3209 USD (1488 USD in March and 1721 USD in April) and 250,000 Kyats as the donation plans for March and April, 2013 (36th monthly donation plan) which was intended to construct brick water reservoir and water pipelines in order to get drinking water at Hpat Yang Gyi Village located in Hopong Township, Taunggyi District, Shan State.
From the collected funds, we donated 2430 USD and 250,000 Kyats (total 2,000,000 Kyats) for the drinking water plan and added rest of the funds (3209 USD – 2430 USD = 779 USD) into the emergency funds.
Being located on the hillside which is over 4000 feet above sea level and is part of the northern region of Mae Nae mountain range, Hpat Yang Gyi Village is about 41 miles and 3-hour drive away from Taunggyi. Since the main road to the village is an earthen one, transportation can be done only by local trucks during rainy season.
For drinking water, total of 364 villagers from 73 households from the village are mainly dependent on stream water from the stream which is 15-min walk from the village. Now, with the collaborative help from the donors, 39 concrete water tanks have been donated and water pipelines have been connected fromastream which is located about one mile from the village and which can provide water supply all year round. Since we could offer help in solving drinking water problem toacertain extent, we are enormously pleased for such good deeds we have done.
Therefore, we would like to show our warmest appreciation to all the donors, ODF Myanmar volunteers, Ko Zaw Lynn Dwe who managed the donation plan in person and all of our friends. We would also like to share the merit of this donation to all of our donors and friends. May all beings be happy, healthy and able to serve the community!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃-မတ်လ နှင့် ဧပြီလအလှူ (၃၆ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဖက်ရမ်းကြီးကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်နှင့် ရေပိုက်များသွယ်တန်းရန် အလှူခံခဲ့ရာ မတ်လအတွက် ၁၄၈၈ ဒေါ်လာ၊ ဧပြီလအတွက် ၁၇၂၁ ဒေါ်လာ (စုစုပေါင်း ၃၂၀၉ ဒေါ်လာ) နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၅၀,၀၀၀ အသီးသီး လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၄၃၀ ဒေါ်လာနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၅၀,၀၀၀ (စုစုပေါင်း မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းနှစ်ဆယ်) ကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ကျန်ရှိငွေ (၃၂၀၉ – ၂၄၃၀ = ၇၇၉ ဒေါ်လာ) ကို အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထဲသို့ ထပ်ပေါင်းထည့်ထားကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဖက်ရမ်းကြီးကျေးရွာမှာ မဲနယ်တောင်တန်း၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၄၀၀၀ ကျော်မြင့်သော တောင်စောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိ၍ တောင်ကြီးမြို့ မှ (၄၁) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး တောင်ကြီးမြို့ မှ ကားလမ်းဖြင့်သွားပါက ၃နာရီခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။ မြေလမ်းခရီးဖြစ်၍ မိုးတွင်းကာလတွင် ဒေသတွင်းအသုံးပြုသော ကုန်တင်ကားများဖြင့်သာ သွားလာနိုင်ပါသည်။
အိမ်ထောင်စု (၇၃) စု ရှိပြီး စုစုပေါင်း (၃၆၄) ယောက် ရှိသော ဒေသခံများမှာ သောက်သုံးရေအတွက် (၁၅) မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်သွားရသော ချောင်းမှ ချောင်းရေကို အဓိကအားထားနေခဲ့ရသည်။ ယခုအခါအတွင်တော့ အလှူရှင်များအားလုံး၏ ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုဖြင့် အဆိုပါ ရွာနှင့် တစ်မိုင်ကျော်ကွာဝေးသော တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေရရှိနိုင်သော ချောင်းတစ်ချောင်းမှ ရေပိုက်များသွယ်တန်းပေးပြီး ကွန်ဂရစ်ရေစည် ၃၉ စည်ကို လှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ရေအခက်အခဲအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြေလည်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့အပေါ် အတိုင်းမသိ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါသည်။
အလှူရှင်များ ၊ ODF Myanmar စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင် (Volunteers) များ ၊ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အစစအရာရာစီစဉ်ပေးသော ကိုဇော်လင်းဒွေး နှင့် သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါသည်။ ယခု ရေအလှူ၏ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအား ဝေမျှပါသည်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လောကအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ။
2013 January Donation Event (34th monthly donation)
We are very delighted to announce that we received 2022 USD for the donation plan of January, 2013 (34th monthly donation) which was intended to provide desks and chairs to Basic Education High School of Mong Khote located in Mong Hsat District, Eastern Shan State.
From the collected funds, we donated 750,000 Kyats (1084.89 USD) to Basic Education High School of Mong Khote and 500,000 Kyats (729.92 USD) to “Takekhar Yarma” nunnery from East Dagon Township, Yangon in order to contribute salaries for the teachers. Please be informed that we have set aside the rest of the funds, 197 USD (2022 USD – 1824.81 USD), as emergency funds.
For 2012-2013 academic year, Basic Education High School of Mong Khote has total 232 students, ranging from primary to high school level.
Since we could contribute required school supplies such as desks, chairs, blackboards and dusters to the school, we would like to give our deep appreciation to our generous donors, volunteers, Ko Zaw Lynn Dwe who managed the donation plan and all of our friends who gave helping hands. May you be well and happy!
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီလ အလှူ (၃၄ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်ရှိ မိုင်းခုတ် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအား စာရေးခုံနှင့် ထိုင်ခုံများ လှူဒါန်းရန်အတွက် အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၂၀၂၂ ဒေါ်လာ ရရှိခဲ့ပါသည်။
မိုင်းခုတ်ကျောင်းအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ ၇၅၀၀၀၀ ကျပ် (၁၀၉၄.၈၉ ဒေါ်လာ) ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်ရှိ တိက္ခာရာမ အခမဲ့ စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာဆရာမများအတွက် နှစ်လအတွက် လစာငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် (၇၂၉.၉၂ ဒေါ်လာ) အသီးသီး (စုစုပေါင်း ၁၈၂၄.၈၁ ဒေါ်လာ) လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုလအတွက် ကျန်ရှိငွေ ၁၉၇ ဒေါ်လာ (၂၀၂၂ – ၁၈၂၄.၈၁) ကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် ထားရှိခဲ့ကြောင်းလည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မိုင်းခုတ် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် မူလတန်းမှ အထက်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၂၃၂ ယောက် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
ယင်းကျောင်းအတွက် လိုအပ်နေသော စာရေးခုံ ၊ ထိုင်ခုံ၊ သင်ပုန်းကြီး၊ သင်ပုန်းဖျက် စသည်တို့ကို လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် သဒ္ဓါကြည်ဖြူစွာဖြင့် လှူဒါန်းကူညီကြသော အလှူရှင်များ ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ ၊ အလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲပေးသော ကိုဇော်လင်းဒွေးနှင့် အခြားသော ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူတင်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
2013-June donation plan (38th monthly donation)
As the plan for June-2013 donation (38th monthly donation), ODF Myanmar has decided to contribute salaries for the teachers from the education center opened at “Takekhar Yarma” nunnery from East Dagon Township, Yangon.
Being located at Anawyahtar Street, Quarter 5, East Dagon Township, Yangon, the nunnery has been established as the education center since 2010 with the guidance of Abbess Daw Takekha Nyarni. The place is not only taking care of orphans (from Kindergarten to fourth grade) for their basic needs and schooling but also giving free education to impoverished students (from Kindergarten to tenth grade) from the neighboring area.
ODF Myanmar has chosen that nunnery as the place to focus our long term assistance project and contributed assistance such as providing crochet and knitting lessons for nuns and girls, giving salaries for the teachers from the education center opened at the nunnery for 2012-2013 academic year and offering teachers training courses for teachers.
Since ODF Myanmar will offer helping hands in contributing salary to teachers which is the necessity of Takekhar Yarma nunnery, we would like to encourage our donors to cooperate with us in contributing for 2013-June donation plan.
Please be informed that donations will be collected 7th July 2013 (Sunday). Donations can be made through ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar). Detailed information for bank accounts and addresses can be found at our website http://odfmyanmar.org/donate.
One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ဇွန်လ အလှူ (၃၈ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းရှိ တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အခမဲ့စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လခအတွက် လှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အဆိုပါ တိက္ခာရာမ သီလရှင်စာသင်တိုက်သည် ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်တိက္ခဉာဏီ ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် သီလရှင်ပညာရေးကျောင်းအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်တန်းမှ စတုတ္ထတန်းထိ မိဘမဲ့ကလေးများအား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပညာသင်ကြားသည့်အပြင် အနီးအပါးမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလည်း သူငယ်တန်းမှ ၁၀ တန်းထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ODF Myanmar အဖွဲ့ အနေဖြင့် ယင်း သီလရှင်စာသင်တိုက်အား အဖွဲ့၏ ရေရှည်ကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အတွက် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ပြီး ကျောင်းရှိ သီလရှင်များနှင့် မိန်းကလေးများအတွက် ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်းပို့ချပေးခြင်း၊ ယင်းစာသင်တိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ လခအတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် တာဝန်ယူပေးခြင်း ၊ ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်းပို့ချပေးခြင်းများဖြင့် အင်အားဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
တိက္ခာရာမ သီလရှင်ပညာရေးကျောင်းတွက် လိုအပ်လျှက်ရှိသော စာသင်ကျောင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လခအတွက် ODF Myanmar မှ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သောကြောင့် အလှူရှင်များအနေဖြင့် ODF Myanmar နှင့်လက်တွဲ၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ အလှူတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အလှူငွေ များကို ၂၀၁၃ ဇူလိုင် ၇ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ ကောက်ခံသွားပါမည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
As the donation plan for 2013 February (35th monthly donation plan), ODF Myanmar has contributed 1,000,000 Kyats to Yadanar Pon Yate Nyein Monastic Education center which was established as the orphanage in 1992 at Thu Mingalar Road, West Kyite Ka San Quarter, Thin Gan Kyoon Township, Yangon.
Please be informed that from the total amount of donation we could raise for February donation plan (1641 SGD), we contributed 1428 SGD (1,000,000 Kyats) for Yadanar Pon Yate Nyein Monastic Education center and 213 SGD to Meikhtila as an emergency donation.
With the guidance of the Abbot Sayardaw U Margainda, the school not only takes care of poor and orphaned children but also provides basic living necessities and education aids to them. According to 2011-2012 academic year, the school took care of total 103 students.
Since our donation could assist in both basic living necessities of orphans and education which plays vital role for the future of our country, we would like to give our warm regards and appreciation to our donors, ODF volunteers and our friends who managed the donation event on behalf of ODF Myanmar.
One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar) ၏ ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလ အလှူ (၃၅ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ကျိုက္ကဆံအနောက်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ၁၉၉၂ အောက်တိုဘာလတွင် မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းအဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရတနာပုံရိပ်ငြိမ် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းအား ငွေကျပ် ( ၁၀ ) သိန်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကောက်ခံရရှိခဲ့သော စုစုပေါင်းအလှူငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၆၄၁ ဒေါ်လာ မှ ၁၄၂၈ ဒေါ်လာ (မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀သိန်း) အား ရတနာပုံရိပ်ငြိမ် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ၂၁၃ ဒေါ်လာအား မိတ္ထီလာမြို့သို့ အရေးပေါ်လှူဒါန်းမှုအနေဖြင့် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ ရတနာပုံရိပ်ငြိမ်ကျောင်းသည် ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီး ဆရာတော် ဦးမာဃိန္ဒ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ၊ မိဘမဲ့ကလေးများအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များအပြင် ပညာရေးကိုပါ ဖြည့်ဆည်းပေးနေသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၁၀၃ ဦး အား ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
မိဘမဲ့ကလေးများ၏ အခြေခံ စားဝတ်နေရေး အပြင် နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် အင်မတန် အရေးပါလှသော ပညာရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီနိုင်ခဲ့သောကြောင့် အလှူရှင်များ ၊ ODF Myanmar အဖွဲ့ဝင်များ ၊ အဖွဲ့ကိုယ်စား သွားရောက်လှူဒါန်းပေးသော မထက်ထက်ဦးတို့အား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
As the donation plan for April, 2013, we do not chooseanew place but we will use the collected money for April for constructing brick water reservoir and water pipelines in order to get drinking water at Hpat Yang Gyi Village located in Hopong Township, Taunggyi District, Shan State. That is the very same place we chose for 2013-March plan.
Please be informed that donations will be accepted till 5th May, 2013 (Sunday).
The following is the detailed information about the plan.
As the donation plan for March, 2013 (36th monthly donation), ODF Myanmar has planned to construct brick water reservoir and water pipelines in order to get drinking water at Hpat Yang Gyi Village located in Hopong Township, Taunggyi District, Shan State. Being located on the hillside which is over 4000 feet above sea level and is part of the northern region of Mae Nae mountain range, Hpat Yang Gyi Village is about 41 miles and 3-hour drive away from Taunggyi. Since communication is dependent on earthen road, transportation can be done only by local trucks during rainy season.
There are 73 households in the village and the total population is 364. For drinking water, local people have to mainly depend on stream water from the stream which is 15-min walk from the village and that stream water is not suitable for drinking and cooking since it used to get polluted in rainy season.
Asastream from which water supply can be obtained for the whole year locates about one mile from the village, the village leaders are trying to construct water reservoir and pipelines.
Estimated cost forabrick water tank (with 15′ x 15′ x 6′ in volume to contain 8400 gallons of water) is 300,000 Kyats and that for pipeline is 690,000 Kyats. Therefore, it is estimated that the total cost would be 1,000,000 Kyats (USD 1,200). The tank would be able to contain water which is sufficient for two-day supply for the whole village.
Since drinking water is crucial for survival of humans, we would like to encourage our donors and friends to cooperate with ODF Myanmar to assist as much as you can in order to get clear drinking water for villagers from Hpat Yang Gyi Village which locates in such hardly reachable area.
Please be informed that donations will be accepted till 5th May, 2013 (Sunday). Donations can be made through official ODF volunteers (http://odfmyanmar.org/volunteers/) or to ODF Bank Accounts (Singapore & Myanmar). For detailed information about bank accounts and contacts, please visit our website https://odfmyanmar.org/donate/.
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃-ဧပြီလ အလှူအတွက် နေရာသစ်ရွေးချယ်ခြင်း မပြုဖြစ်ဘဲ ၂၀၁၃-မတ်လအတွက် စီစဉ်ထားသော ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဖက်ရမ်းကြီး ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန်နှင့် ရေပိုက်များ သွယ်တန်းရန် ဆက်လက် လှူဒါန်းသွားမည့် အကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၃ မေလ ၅ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အစီအစဉ် အသေးစိတ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ODF Myanmar ၏ ၂၀၁၃-မတ်လ အလှူ (၃၆ ကြိမ်မြောက် လစဉ်အလှူ) အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ဖက်ရမ်းကြီး ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန်နှင့် ရေပိုက်များ သွယ်တန်းရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဖက်ရမ်းကြီးကျေးရွာမှာ မဲနယ်တောင်တန်း၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၄၀၀၀ ကျော်မြင့်သော တောင်စောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ တောင်ကြီးမြို့ မှ (၄၁) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး တောင်ကြီးမြို့ မှ ကားလမ်းဖြင့်သွားပါက ၃နာရီခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေလမ်းခရီးဖြစ်၍ မိုးတွင်းကာလတွင် ဒေသတွင်းအသုံးပြုသော ကုန်တင်ကားများဖြင့်သာ သွားလာနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၃) စု ရှိပြီး စုစုပေါင်းဦးရေမှာ (၃၆၄)ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံများမှာ သောက်သုံးရေအတွက် (၁၅) မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်သွားရသော ချောင်းမှ ချောင်းရေကို အဓိကအားထားရပြီး ထိုရေမှာလဲ မိုးတွင်းကာလများတွင် ညစ်ညမ်းလေ့ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရန်နှင့် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။
ရွာနှင့် တစ်မိုင်ကျော်ကွာဝေးသော ချောင်းတစ်ချောင်းမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေရရှိနိုင်သဖြင့် ကျေးရွာလူကြီးများမှ ဦးဆောင်၍ ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရေပိုက်များသွယ်တန်းရေးအတွက် ကြိုးစားနေသည်ဟု သိရပါသည်။
အုတ်ရေလှောင်ကန် (၁၅’ x ၁၅’ x ၆’ ထုထည်ရှိ ၈၄၀၀ ရေဂါလံဆန့်) အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပြီး ပိုက်လိုင်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ၆၉၀,၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ကျပ် (USD 1,200) ကျသင့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ အဆိုပါ ကန်သည် တစ်ရွာလုံးအတွက် နှစ်ရက်စာခန့် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။
သောက်သုံးရေသည် လူ့ဘ၀အသက်ရှင်နေနိုင်ရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သော လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲသောဒေသရှိ ဖက်ရမ်းကြီးကျေးရွာနေ ရွာသူရွာသားများအတွက် ရေကြည့်ရေသန့် ရရှိနိုင်စေရန် မိမိတို့ ODF Myanmar နှင့် လက်တွဲ၍ တတ်အားသရွေ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီရန် အလှူရှင်များ၊ မိတ်ဆွေများအား နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
အလှူငွေများကို ၂၀၁၃ မေလ ၅ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နောက်ဆုံးထား၍ လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အလှူငွေများကို ODF Volunteers http://odfmyanmar.org/volunteers/ များမှ ဖြစ်စေ၊ ODF Bank Accounts (Singapore, Myanmar) သို့ ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို http://odfmyanmar.org/donate တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။